म्याग्दी, १७ साउन । जिल्लामा घरजग्गा कारोवारबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु दुई करोड २८ लाख ३९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत मुकुन्द पौडेलका अनुसार गवत आवमा ग्रामीण क्षेत्रमा एक हजार १८४ र शहरी क्षेत्रमा एक ...
काठमाडौ २२ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ। यसका लागि दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। बिक्री गरिने कुुल ट्रेजरीमध्ये २८ दिने अवधिको ३ अर्ब २५ करोड र ...
काठमाडौ १९ माघ । ग्लोवल आईएमई बैंकले थप तीनवटा शाखारहित सेवाकेन्द्र विस्तार गरेको छ। बैंकले कपिलबस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नरपालिका वडा नं. ९, जगदिशपुरमा आफ्नो ६६औँ र बिहीबार नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्लाको हुप्सीकोट गाउँपालिका वडा नं. ४, झ्यालबासमा ६७औँ तथा ...
काठमाडौँ, १४ माघ . देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल २९ विमानस्थलमध्ये ११ वटा विमानस्थलको मात्रै कमाइ रु एक करोडभन्दा माथि छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा विमानस्थलको कमाइ कम हुँदा सञ्चालन खर्च चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ । सरकार ...
काठमाडौ ८ माघ । अब जुनसुकै बैंकमा खाता भए पनि पैसा जम्मा गर्न त्यही बैंकको शाखामा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। नजिकै भएको अर्को कुनै बैंकको शाखामार्फत पनि आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो ...
काठमाडौ ७ माघ । कृषि विकास बैंकले आइतबार विशेष कार्यक्रयक्रमका साथ आफ्नो ५१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि सञ्चालनमा आए पनि बैंकले आफ्नो गतिविधि बढाएर वाणिज्य बैंकको हैसियतमा पुगेको बताएको छ। बैंकले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना (२०१५ ...
काठमाडौ ३ माघ । लण्डनको रेमिट्यान्स कम्पनी सिगे मनी ट्रान्सफर र सिटी एक्सप्रेस मनीबीच रेमिट्यान्स सेवा सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै सिगेबाट पठाएको रेमिट्यान्स रकम सिटीका जुनसुकै एजेन्टहरुबाट बुझ्न सकिनेछ। सिगे मनी ट्रान्सफरको विश्वभर १३० बढि देशहरुमा सञ्जाल छ। यो सेवा सुरु ...
सार्वजनिक विदाका दिन पनि बैंक खुल्ला राख्न राष्ट्रबैंकको निर्देशन
काठमाडौँ, २७ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १९ गते राजश्व संकलनका लागि सम्पूर्ण बैंकहरुलाई खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको छ। असोज, पुस, चैत र असार महिनाको २५ गतेपछि शनिबार वा अन्य जुनसुकै सार्वजनिक विदा परे पनि राजश्व संकलन तथा ...
काठमाडौ २३ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आईतबार प्रभु बैंकसहित पाँच कम्पनीको सेयरमूल्य एकैदिन समायोजन गरेको छ । दुई कम्पनीको हकप्रद तथा तीन कम्पनीको बोनसपछि आईतबार सेयरमूल्य समायोजन भएको हाे । प्रभु बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले जारी गर्न लागेका हकप्रदलाई ...
कठमाडौ २२ पुस । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले काभ्रेमा रहेका तीनवटा ग्यास उद्योगलाई उत्पादन तथा बिक्री–वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका निर्देशक मनोजकुमार उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै सगरमाथा, सूर्य र चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगमा सिल गरेको हो। ...
काठमाडौ २१ पुस । लगानीयोग्य रकमको अभावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक साताको अवधिमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा पठाउने भएको छ। योमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ भने बाँकी १० अर्ब आगामी आइतबार पठाउँदैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग भएको ...
बुटवल, १८ पुस । रुपन्देही उद्योग संघको आयोजनामा बुटवलमा सञ्चालित १४ औँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव–२०७४ मा रु ३० करोडको कारोवार भएको छ । करिब छ लाख २५ हजार दर्शकले अवलोकन गरेको प्रर्दशनीमा लक्ष्य भन्दा रु ...
काठमाडनौ १४ पुस । काठमाडनौ १४ पुस। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरु अब एउटा बैंक छाडेर अर्कोमा जानुअघि ६ महिना खाली बस्नुपर्ने भएको छ। अर्थात छोडेको ६ महिनासम्म नयाँ पदवहाली गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय ...
काठमाडौँ, १२ पुस । विद्युत् खरिद सम्झौता नविकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोली आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले यही पुस १६ गतेदेखि सकिन लागेको विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण ...
काठमाडौ ११ पुस । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारमुलक उद्योग खोली गरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पु¥याउन उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री रेशमबहादुर लामा र सचिव यामकुमारी ...
काठमाडौ ४ पुस । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो । तर, ...
काठमाडौ २९ मंसिर । निर्धारित सयमा एटीएम मेसिन स्तरोन्नति नगर्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको छ । एटीएमभित्र मेसिन स्तरोन्नति नगर्दा धैरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखि बढेको हो । हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चिप ग्राहको महत्वपुर्ण ...
काठमाडौ २८ मंसिर । मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् पहिलोपटक गठन भएको प्रदेशसभाका लागि ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा व्यवस्था गरेको २ सय ३२ अर्ब १९ ...
काठमाडौँ, २५ मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बराबरी हैसियतमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थापा खोला र सर्दी खोला जोडिएपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन बराबरी हैसियतमा पुगेको हो ...
काठमाडौँ, १९ मंसिर । कर्मचारी सञ्चयकोषले व्यक्तिगत रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न दिने सुविधा ल्याउन लागेको छ । रकम जम्मा गर्नेको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यका साथ व्यक्तिगत रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न पाउने योजना सञ्चयकोषले अगाडि सारेको हो । कोष सञ्चालक ...
परासी, १७ मंसिर । उद्योगपति विनोद चौधरीलाई यस पटकको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन दुवै सदनको सदस्यको लागि प्रत्यक्षतर्फका उठेका उम्मेद्वारहरुलाईभन्दा पनि बढी लागेको छ । नेपाली कांग्रेसको आर्थिक समृद्धि तथा विकास समन्वय उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कहिले प्रधानमन्त्री ...
काठमाडौ , मंसिर १७ । कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखाकी सहायक टेलर दीपिका रेग्मी बैंकको करिब ५ करोड ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन् । विद्युतीय चेक क्लियरेन्स (इसिसी) गर्दा दोहोरो इन्ट्री गराई बैंकको करिब ४ करोड ९१ लाख आफ्नो ...
काठमाडौँं, १० मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा मुलुकमा निजीकरणका नाममा ३८ उद्योग धराशायी भएको जिकिर गर्नुभएको छ । एमाले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ चुनाव कमिटीले आज बौद्धमा आयोजना गरेको ...
कञ्चनपुर, ९ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लेखराज भट्टले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य आफू वाणिज्यमन्त्री हुँदा अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । आज बिहान पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भारतसँग सहज व्यापार सञ्चालनका लागि सुख्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्छ ...
काठमाडौँ, १५ कात्तिक । उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेका दरबारमार्गस्थित आठ पसल सञ्चालकलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले आज अनुमति दिएको छ । अत्यधिक मूल्यमा सामान बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आठ व्यापारीलाई ...